GỤỌ NKE Afrikaans Albanian American Sign Language Amharic Arabic Argentinean Sign Language Armenian Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bengali Bicol Bislama Brazilian Sign Language Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitumbuka Cibemba Colombian Sign Language Croatian Czech Dangme Danish Drehu Dutch Efik English Estonian Ewe Finnish French Ga Georgian German Greek Greenlandic Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Italian Sign Language Japanese Japanese Sign Language Kannada Kazakh Kikaonde Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kisonge Kongo Korean Krio Kwangali Kwanyama Latvian Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Marathi Maya Mexican Sign Language Mizo Moore Ndebele Ndonga Nepali Ngabere Norwegian Nyaneka Nzema Oromo Ossetian Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Punjabi Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Romanian Russian Russian Sign Language Samoan Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Tahitian Tamil Tatar Telugu Thai Tigrinya Tshiluba Tsonga Turkish Twi Tzotzil Ukrainian Umbundu Urdu Uzbek Venda Vietnamese Wallisian Waray-Waray Wayuunaiki Wolaita Xhosa Yoruba Zande Zulu
3 Andy kwuru, sị: “Ama m na ahapụrụ m ụmụ m mgbe m kwesịrị ịna-eduzi ha, na-emekwa ka ha mata na m hụrụ ha n’anya. Mụ na ha anọghị n’oge ahụ ka m nwee ike ịna-agụrụ ha akụkọ ndị a kọrọ na Baịbụl, na-amakụ ha, anyị ana-ekpekọ ekpere, na-egwukwa egwu.” (Diut. 6:7) Ada ya aha ya bụ Anna kwuru, sị: “Mgbe ahụ papa m na-anọghị ya, obi anaghị eru m ala. Mgbe ọ lọtara, ihe anyị ji mata ya bụ ihu ya na olu ya. O nwechara otú ọ dị m mgbe ọ makụrụ m.”
4. Ọ bụrụ na nna hapụrụ ezinụlọ ya gaa biri n’ebe ọzọ, gịnị mere ọ ga-eji esiri ya ike ịbụ ezigbo onyeisi ezinụlọ?